တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB, Standard PCB2layer 1oz FR4 TG135 HASL lead free PCB with two types. - တရုတ်တင�စံ PCB��အလွှာ 1oz FR4 TG135 HASL နှစ်မျိုးနှင့်အတူအခမဲ့ PCB ဦးဆောင်လမ်းပြr 1oz FR4 TG135 HASL lead free PCB with two types. ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB, စံ PCB2အလွှာ 1oz FR4 TG135 HASL နှစ်မျိုးနှင့်အတူအခမဲ့ PCB ဦးဆောင်လမ်းပြ.
ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, စံဘုတ်အဖွဲ့, FR4 ဖျင်ပစ္စည်း TG နှင့်အတူသုံးပါ > 135°C နဲ့ td > 335°, ကိုလက်စသတ်ဘုတ်အဖွဲ့အထူ "0,062 ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ရှင်းလင်းသောကြေးနီကျော်ဘုတ်အဖွဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှအစိမ်းရောင်အရည်ဓာတ်ပုံကို image ဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံး Apply, NO Silkscreen, အမြဲတမ်း, အော်ဂဲနစ်, Non-ကူးမှုမှင်. LF HASL မျက်နှာပြင်ကုသမှု, ယူနစ်အရွယ်အစား: 173,99 * 234.95MM / 2up, 2up panel ကအဖြစ်သင်္ဘော, အဆိုပါနည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေစံဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်, 1အောင်, min.hole အရွယ်အစား :0.25MM. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည် ဆေးဘက် ပစ္စည်းကရိယာ. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
အနီရောင် soldermask PCB စံ PCB2HASL နှင့်အတူအလွှာ FR4 TG135 PCB အခမဲ့ဦးဆောင်လမ်းပြ.